Chiitiko Kushambadzira: Sei Kuwedzeredza Yako Inotevera Chiitiko
Ndave ndiri fan kwenguva yakareba yaHugh McLeod neunyanzvi hwake pa gapingvoid kwemakore mazhinji, mazhinji. Hugh nguva pfupi yadarika akaburitsa iyi hurukuro pamusoro pekutengesa chiitiko chako. Vazhinji vatengesi vezviitiko vanotenda kuti kushambadzira kunopera kana chiitiko chatanga. Muzuva rino rekutsvaga uye vezvenhau, zvakadaro, kuwedzera chiitiko chako nezvakanaka zvipo nemikana zvichapusha kubudirira kwechiitiko chako - uye zvinotevera zviitiko zvemwedzi nemakore anouya.
Pandinoverenga online nezve chiitiko chakakura chevandinoshanda navo, handigone kubatsira asi kunzwa sekunge ndasiiwa. Ini ndinozviita tsika yekuronga kusvika kune inotevera chiitiko icho vanhu uye varongi vari kuisa pamwechete. Nepo kushambadzira kwako kwekuenda pachiitiko chiripo kungamira kana masuo akavhurwa, ako kushambadzira kuyedza kwechiitiko chinotevera kuchangotanga!
Tags: kushambadzira kwechiitikozviitikoKushambadzira Misanganokushambadza zviitikotsvaga misanganotsvaga zviitikomagariro enhauzviitiko zvezvemagariro
Mbudzi 13, 2012 na10: 38 PM
HI Douglas, ndatenda nezano rinotyisa iri. Nekudaro, ini ndiri kungoda kuziva kuti ndinofungidzira kuti zvinofanirwa kugadzirira kana uchitanga kurota kwako kukuru. Isu takatonyatsofunga izvi zvese gadziriro dzawataura mune yako posvo.